I-LG X5, ilungu elitsha lodidi lokungena kunye nebhetri enkulu | Iindaba zeGajethi
I-LG yaseKorea ayenzanga ngxolo ingako ngokusungulwa okutsha okwenzeke kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Sisiphelo sendlela esitsha esikwinqanaba lokungena, elibizwa ngegama I-LG X5. Eli qela, ngaphandle kokugxininisa kakhulu kwiinkalo zobuchwephesha- ngokubhekisele kumandla - liyenza kwicandelo lebhetri.
I-LG X5 liqela elitsha, njengoko besesitshilo, aliveli ngamandla alo. Ngenxa yoko, sikwahlula kuluhlu lokungena lomenzi. Njengoko siza kubona kamva, Ixabiso layo eliguqulelwe kwi-euro liphezulu kakhulu, ke inokuyibeka ngaphandle komdlalo phambi kokhetho olunomdla ngakumbi kunye namanqanaba aphezulu -Hi, Xiaomi-.
Le LG X5 inesikrini esilinganayo se-5,5-intshi kwaye inika isisombululo se-HD; Oko kukuthi: iiphikseli eziyi-1.280 x 720. Okwangoku, ngaphakathi siya kuba neprosesa esayinwe yiMediaTek kwaye ine-8 yenkqubo yenkqubo: a I-MT6750 kwi-1,5 GHz eya kuhamba kunye ne-2 GB RAM kunye nendawo yokugcina efikelela kuma-32 GB. Ewe kunjalo, icacisiwe ukuba inekhadi le-microSD slot.
Ngokubhekisele kwiikhamera zayo, ngaphambili siya kuba ne-5 megapixel sensor, ngelixa eyona khamera yayo iphambili ifikelela I-megapixels ze-13. Kwakhona ngasemva siya kuba nokufunda ngomnwe ukuvula izixhobo ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo.
Ngoku, i-LG X5 ine-protagonist engenakuphikiswa. Imalunga nebhetri yakho umthamo weemililitha ezingama-4.500 XNUMX kwaye kufanele ukuba ikunike ubomi bebhetri ukuya kuthi ga kwiintsuku ezi-2 ukuba awunyanzelekanga ukuba ube nomsebenzi omninzi kwiprosesa yakho. Okokugqibela, isoftware efakiweyo yi-Android 8.0 Oreo kwaye iya kufika kuqala kwilizwe layo lokuzalwa ngexabiso lama-363.000 ophumeleleyo okanye I-280 euro ukuyitshintsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-LG X5, ilungu elitsha lodidi lokufaka kunye nebhetri enkulu
Iiplanethi ezintathu ezintsha ezisandula ukwenziwa zafumana umbulelo kwi-ALMA